मिस नेपालमा “मिस” भएको मधेशी समुदाय - Nayapul Online
मिस नेपालमा “मिस” भएको मधेशी समुदाय
प्रकाशित मिति : Saturday, April 6, 2019 nayapulonline
( बहस )
सन् १९९४ बाट सुरु भएको मिस नेपालले हाल सम्म २४ जना मिस नेपालको घोषणा गरिसकेको छ र २५ औं को नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । यसको आयोजक दि हिडेन ट्रेजर हो । जसको अर्थ नेपालीमा लुकेको बहुमुल्य सम्पत्ति हुन्छ । “सुन्दता, दिमाग, आत्मविश्वास र सकरात्मक सोच” यसको नारा हो । तर न यसले लुकेका सुन्दर नारीहरुलाई प्रतियोगितासम्म ल्याएको देखिन्छ न सकरात्मक विचार, आत्मविश्वास र दिमाग जस्ता कुरालाई नै नारामा भने जस्तै गरि प्रोत्साहन गरिरहको देखिन्छ । जे देखिन्छ, त्यो बढि शारीरिक बनावट र निर्णायकको व्यक्तिगत सोच मात्र छ ।
देशको करिब आधा जनसंख्या ओगटने मधेशी नारीहरुका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष विस्मात जस्तै बनेको छ, यो सुन्दरी प्रतियोगिता । हालसम्मका २४ जना मध्ये प्रथम मिस नेपाल रुवी राणा र नवौं उषा खड्गी विरगन्ज निवासी हुन् तर मधेशी अनुहार होइन्न । सन् २०१७ मा मारवाडी समुदायबाट निकिता चन्दक मिस नेपाल बनेकी थिइन तर उनी पनि मधेशी समुदाय भित्र पर्दिनन् । फेरि, मिस नेपाल जस्ता सयौं मञ्चहरु छन् जहाँ मधेशीहरु प्रथामिकतामा पर्दैनन् । भन्ने गरिन्छ, मधेशीहरु नै आउदैनन् भनेर तर तिनिहरु किन आउन सकेननन् त ? कसैले कारण खोज्न सकेको छ त ? देशको नाम नै राखेर गरिने यस्ता प्रतिस्पर्धाहरुमा वर्षौदेखि एउटा ठूलो समुदाय छुटनु कति सम्म न्यायोचित हो ? यस प्रतियोगिताले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि स्थान पाउने भएकाले प्रतियोगिता आम नेपालीको हुनु नितान्त जरुरी हो तर त्यसमा आयोजक सधैं चुकिरहेको छ र यसले जनमानसमा धेरै प्रकारका प्रश्नहरु पनि जन्माएको देखिन्छ ।
के मिस नेपालले तय गरेका नाराहरु भित्र उनीहरु पर्दैनन् त ? कस्तो अनुभव गरेका होलान हाम्रा मधेशी दिदि बहिनी र दाजु भाईहरुले यस्तो कार्यक्रमबाट ? के यस्तो खाले व्यवहारहरुले हाम्रो सामुहिकता, एकता र राष्ट्रियतालाई दरिलो बनाउन सक्ला त ?
प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झालाई बेला बखतमा आफुलाई नेपाली भन्न किन अपठ्यारो मानेको भन्नेहरुले कहिले सोचेका छन् नेपाल भित्र मधेशी समुदायहरुमा भएको प्रतिभा र कलालाई किन स्थान नदिएको भनेर ? देश भित्रको मधेश भन्नेहरुले सोचेका छन् त, नेपाली भित्रका मधेशी भनेर ? यहि सोचका छन् भने उनीहरुको व्यवहार पनि त्यहि अनुसार छ त ?
हुन त मिस नेपालमा सहभागि भएर त्यसको ताज पहिरिनु मात्रै ठूलो विषय हैन् तर यस्ता किसिमका कार्यक्रम तथा प्रतिस्पर्धाहरुमा लामो समय एउटा समुदाय छुट्नुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न होला । आजको दिनमा यी विषयमा पर्याप्त बहस र छलफल गरेर आगामी दिनमा न्यायोचित ढंगले अगाडि बढ्ने पर्ने बेला आएको देखिन्छ ।
:: हामी, प्रस्तुत सामग्रीप्रति तपाईका सुझावहरुको अपेक्षा गर्दछौं ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदमा दरखास्त आह्वान (सूचनासहित)
हिमाल आरोहणका लागि हालसम्म ४६ आरोही समूहले आरोहण अनुमति लिए
अब नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको कारण सास्ती भोग्न नपर्ने
न्योनो कम्बल पाएपछि, खुशि भए ८० कटेका मेलुङवासी जेष्ठ नागरिक
दिलदार खड्का जस्ले वडाबासीलाई तामाकोशीको सेयर किन्न ५/५ हजार दिए
विप्लवलाई हिंसा छाडेर वार्तामा आऊन कांग्रेस सभापतिको आग्रह